Rosso Levanto isamaroon red marble from India. The color of this marble is dark red and maroon with cream color veins. Rosso Levanto စကျင်ကျောက်များ၏သွေးပြန်ကြောဟာ Bidasar စကျင်ကျောက်ဆင်တူသည်. Udaipur, Rajasthan ဤလှပသောအနီရောင်စကျင်ကျောက်၏ကျောက်မိုင်းရှိပါတယ်. သငျသညျတစ်ခုလို့ဆိုရမှာပါ၌ဤစကျင်ကျောက်ကိုဝယ်လို့ရပါတယ်, အုပ်ကြွပ်နှင့်အကြံအဖန်တွေချည်းကောင်တာအရွယ်အစား. ဤသည်စကျင်ကျောက်ကြမ်းပြင်များနှင့်မီးဖိုချောင်ကောင်တာများအောင်များအတွက်အလွန်ကောင်းသောရွေးချယ်မှုဖြစ်ပါသည်.
အပြီးသတ် အရောင်တင်, Leathered
Rosso Levanto စကျင်ကျောက်ကြမ်းခင်းများ၏ပြား
အခြားအစကျင်ကျောက်မတူဘဲ, ကျနော်တို့ Gangsaw ပေါ်မှာဤလှပသောစကျင်ကျောက်ဖြတ်အဖြစ်ရှုးအပေါ်. ကျနော်တို့ကဒီစကျင်ကျောက်အတွင်းရရှိနိုင်ပါကအောက်ပါအရွယ်အစားရှိ:
Rosso Levanto စကျင်ကျောက်ကြမ်းခင်း၏ tiles
ကျနော်တို့ Rosso Levanto အတွက်အုပ်ကြွပ်အမျိုးမျိုးလုပ်, အောက်ပါကျနော်တို့မှန်မှန်ဖြတ်သည့်အရွယ်အစားများမှာ
PCTRL24x12 ပိုလန်စံကိုက်ညှိ 610x305x10 မီလီမီတာ (2412 စကျင်ကျောက်ကြမ်းခင်းကွက်များ×)
PCTRL24x24 ပိုလန်စံကိုက်ညှိ 610x610x12 မီလီမီတာ (2424 စကျင်ကျောက်ကြမ်းခင်းကွက်များ×)
PCTRL12x12 ပိုလန်စံကိုက်ညှိ 305x305x10 မီလီမီတာ (1212 စကျင်ကျောက်ကြမ်းခင်းကွက်များ×)
PTRL60x30 ပွတ်ကွက်များ 60x30x2 စင်တီမီတာ - အသင့်ဖြစ်ပြီလားစတော့အိတ်
PTRL60x40 ကွက်များ 60x40x2 စင်တီမီတာပွတ် - အမိန့်တွင်
PTRL40x40 ကွက်များ 40x40x2 စင်တီမီတာပွတ် - အမိန့်တွင်
PTRL60x60 ကွက်များ 60x60x2 စင်တီမီတာပွတ် - အမိန့်တွင်
ငါတို့သည်လည်း၏အထူနှင့်အတူ Rosso Levanto အတွက် 18 "x18" ၏အုပ်ကြွပ်နှင့် 400mm x ကို 400mm ချက်တွေကိုအုပ်ကြွပ်အောင် 20 မီလီမီတာနှင့် 10 မီလီမီတာ.
Rosso Levanto တူရကီကနေစျေးကြီး Rosso စကျင်ကျောက်မှပြီးပြည့်စုံကအခြားရွေးချယ်စရာဖြစ်ပါသည်. ဤသည်စကျင်ကျောက်တဲ့မီးဖိုချောင်ကောင်တာများနှင့်မြို့ရိုးကိုဝတ်ပစ္စည်းအဖြစ်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းတွင်လူကြိုက်များ. ဤသည်အလွန်ခဲယဉ်းစကျင်ကျောက်ဖြစ်ပါသည်, ကျနော်တို့ကျောက်စက်ပေါ်မှာဖြတ်. အဆိုပါခိုင်မာသောကြောင့်, ဒါဟာအလွန်အစွမ်းထက်တဲ့ချောကြာ. The polishing of this marble is better than any other marble. Apart from glossy finishing, we also produce matt finishing and leather finishing on this marble. You can use this marble in flooring, မြို့ရိုးကိုဝတ်, မီးဖိုချောင်ထိပ်, Worktops, and any other application.
The flooring of Rosso Levanto Marble isavery popular application. You can use tiles and slabs of this marble for flooring uses. The surface of the marble is all weatherproof. It does not take stains easily. သင်တို့သည်လည်းအခင်းများနှင့်မြို့ရိုးကိုဝတ်ဘို့သင့်ကြီးမားသောစီမံကိန်းများတွင် Rosso Levanto စကျင်ကျောက်ကိုသုံးနိုင်သည်.
5 ပေါ်အခြေခံကာ2မဲ
January 1st, 2018 |0မှတ်ချက်များ
December 27th, 2017 |0မှတ်ချက်များ
December 26th, 2017 |0မှတ်ချက်များ